Taliyaha Amisom: Kama hari doono sarakiisha Alshabaab ee ka baxay degmooyinka – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Taliska AMISOM ayaa maanta ka warbixiyey howgalka milateri ee ay ka wadaan qaar ka mid ah gobollada koonfurta iyo bartmaha Soomaaliya, iyadoo talisku sheegay inaan laga hari doonin saraakiishii Alshabaab ee ku sugnaa deegaanada la qabsaday.
Taliyaha ciidanka AMISOM Lt. Gen. Silas Ntigurirwa oo maanta warbaahinta kula hadlay Magaalada Muqdisho, gaar ahaan xarunta Ciidanka AMISOM ee Xalane, ayaa wuxuu ka hadlay dagaalada ciidanka AMISOM ay kula wareegeen deegaano ka tirsan Gobalada Bakool, Gedo iyo Hiiraan.
Gen. Silas Ntigurirwa ayaa shirkiisa jaraa’id ku sheegay in howlgallada ka socda gobollada dalka qaar ka mid ah ay yihiin kuwo lagu doonayo in lagu nabadeeyo Somalia, isla markaana Al-shabaab looga sifeeyaan meelaha ay dalka ka joogaan.
Taliyaha ayaa caddeeyey ineysan ka bixi doonin goobaha ay Alshabaab kala wareegaan, wuxuuna yiri “Waxaan doonayaa inaan idiin caddeeyo in goobaha Alshabaaab laga saaro aan laga bixi doonin oo ammaankooda aad loo adkeyn doonon, waxaan doonaynaa in deegaannadaas aan xasillooni kusoo dabaalno, mana ogolaanayno in Al-shabaab ay dib u qabsato,” ayuu yiri taliyaha AMISOM Gen. Silas Ntigurirwa.
Taliyaha ciidanka AMISOM, ayaa sheegay inay ka war hayaan Shabaab badan oo soo galay Magaalada Muqdisho, waxaana uu sheegay in Shabaab markii laga qabsaday Gobalada dalka qaar ay bilaabeen inay Muqdisho soo galaan.
“Waan ognahay in tiro kamid ah dagaalamayaasha Shabaab inay ku soo noqdeen magaalada Muqdisho, waxaana ay doonayaan inay qal-qal dhanka ammaanka ah inay ka geystaan Magaalada Muqdisho”ayuu yiri Taliyaha ciidanka AMISOM.
Taliyaha AMISOM ayaa sheegay in degmooyinka ay qabsadeen ay ugu tageen dad dhibaateysan oo u baahan gar-gaar bini’aadinimo.
Taliyaha AMISOM ee kasoo jeeda dalka Burunid ayaa shacabka Soomaaliyeed ka dalbaday inay gacan ka siiyaan ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda sidii Al-shabaab looga adkaan lahaa, kuwa baxsadka ahna loo soo qaban lahaa.
“Waxaan shacabka Soomaaliyeed ka doonaynaa taageero, waxaad noo suuro-gelin kartaan inaan soo qabano Al-shabaab, waayo waxaad tihiin kuwo awood leh oo ka qayb-qaadan kara soo qabshada Al-shabaabka cararaya,” ayuu yiri taliye Ntigurirwa.
Taliyaha AMISOM wuxuu xusay inaan laga hari doonin saraakiishii Alshabaab ee ku sugnaa degmyoonka laga qabsaday, kuwaasoo u baxay degmooyin kale oo aan weli ciidamada huwanta ah gaarin iyo deegaanada miyiga ah.
Al-shabaab ayaa waxaa todobaadyadii lasoo dhaafay lagala wareegay gacan ku heynta degmooyinka Buur-dhuubo, Xudur, Waajid, Rabdhuure, Buulo-burte iyo kuwo kale, waxaana ciidamada huwanta ah weli kusii socdaan degmooyin kale oo ka tirsan Hiiraan iyo Galgaduud.